Nyoro PVC & Rubber Fekitori - China Nyoro PVC & Rubha Vagadziri uye vanotengesa
Zvinhu zvakapfava zvePVC zvakawedzera uye zvakanyanya kufarirwa pasirese pasirese, hazvina basa mukati meimba kana kunze kwemusuwo. Nemhando yakapfava uye yakachipa, yakapfava PVC zvinhu zvinogadzirwa kuita zvigadzirwa zvakawanda, izvo zvinotora zvakanyanya uye zvakakosha mabasa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Ingotarisa-tarisa pamatenderedzwa ako, isu hatigone kuve nehupenyu hwakareruka pasina zvinhu zvakapfava zvePVC, seSoft PVC kiyi maketani, Soft PVC mapikicha emafoto, Soft PVC mabhandi, maSoft PVC waya mavhiri, Akapfava PVC mukwende ma tag, Soft PVC firiji magineti, Nyoro Menduru dzePvc uye Etc. Izvo zviri nyore kwazvo kuzadzisa chinoonekwa uye chinoshanda chinangwa nechinhu chidiki chine mavara, kugutsa kushandiswa kwevanhu kwezuva nezuva uye kushambadza sangano mune ese marudzi ezviitiko. Mazhinji eSoft PVC zvinhu zvinogona kugadzirwa mu2D uye 3D magadzirirwo, iwo magadzirirwo anogona kuve akagadziriswa, nemhando dzese nzira dzekuisa marogo. Nguva yekugadzira ipfupi pane vamwe, isu tinochinjika pane inotungamira nguva uye mutengo. Mibvunzo yako inofanira kubatwa mukati memaawa makumi maviri nemana ekushanda nechikwata chedu chinoshanda. Chipo chakakosha chinogona kupihwa nehukuru hukuru huwandu.
Yakapfava PVC Miniature / Anime Mifananidzo